Kanjani uphephile Nakuba Ukushayela Phakathi Winter | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kanjani uphephile Nakuba Ukushayela Phakathi Winter
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 16/01/2021)
Winter yisikhathi ephelele ukwakha wokuqhuma imililo, ngokuphepha hit kwemithambeka, ukwakha Snowmen kanye Snuggle up inkomishi nice itiye. Ngeshwa, akusiwona wonke kumnandi futhi imidlalo. Winter futhi kudala ezinye komgwaqo ekhohlisayo kunazo izimo. Ngoba akwenzeki iningi lethu lokulala ubusika bonke kuze entwasahlobo, nazi amathiphu udinga ku kanjani uphephile lapho ushayela ebusika.
Ukushayela Safe? Izinombolo Musa Amanga
Cabanga we are ncisheka uqaphe ngokweqile akunika amathiphu Indlela yokuhlala uphephile lapho ushayela ngesikhathi Winter? Ngokuvumelana ne AAA, Winter iziphepho, sezulu esibi, kwazo nemigwaqo emibi inobudlabha ziyimbangela ezingozini abangaba isigamu sesigidi futhi ezingaphezu kuka 2,000 isibalo sabashona ezingozini zomgwaqo zonke ebusika.
Pakisha Up Supplies eziphuthumayo i Car lakho lohambo
Ngezinye izikhathi, inhloso yakho ukuze uhlale uphephile lapho ushayela ngesikhathi ebusika akwanele. Sithanda iyophila Isiqubulo, 'Ithemba for the best, ukulungiselela lo 'okubi kakhulu. Qiniseka imoto yakho ahlonyiselwe izimpahla uma esiphuthumayo. Faka ngengubo efudumele, izingubo ezifudumele, kit zokuqala zosizo, flashlight noma ukuvuleka, jumper amakhebuli, i bushelelezi ice, lokwela, isihlabathi noma kitty udoti ukukunika traction, futhi iqhwa ngamaketanga. Kufanele athwale amanzi, ukudla-like Amabha amandla noma umzila ukuxubana-futhi ishaja efonini!
Lena ithiphu ukushayela ebusika ukuthi lochwepheshe ukudonswa okude Abashayeli zisebenzisa ukunquma uma izimo mgwaqo ezineqhwa. Hlola izibuko zakho ngaphandle. Uma iqhwa iyaqala ukwakha phezu izibuko, lokho inkomba ukuthi iqhwa futhi ukwakha imendo. Thatha izinyathelo zokuzivikela ukuze uhlale uphephile lapho ushayela noma ulinde size nendlu yaqala ukufudumala ukushayela.
Shayela Okuphephile Shiya Early!
Lokhu kungaba sengathi omunye esobala, kodwa siyazi ukuthi umatasa futhi bemagange yokufinyelela lapho uya khona eduze. Silapha ukukukhumbuza ukulithatha kancane! One of our main tips on Indlela yokuhlala uphephile lapho ushayela ebusika uvumela isikhathi esengeziwe ukuze ufike esikhumulweni uya khona. Uhambo kungathatha isikhathi eside ebusika kunamanye izikhathi zonyaka, ikakhulukazi uma uhlangabezana izimo isiphepho noma migwaqo ezineqhwa. Futhi ushayela sezulu esibi kuyakhandla ngokwanele ngaphandle kokucindezela wanezela ngemva kwesikhathi, okungenzeka iphazamise ukushayela ukwahlulela yakho iphephile.
Shayela Okuphephile Nciphisa Iziphazamiso
Indlela yokuhlala uphephile lapho ushayela ngesikhathi Winter #1 ithiphu: Beka phansi ucingo lwakho! Gcina ifoni yakho ivaliwe noma ixhumeke emotweni yakho ne-Bluetooth futhi sibuthathe izandla zakho off kwesondo noma amehlo emgwaqeni ukuhlola ukuthi WhatsApp umyalezo.
Hlala Safe Nakuba Ukushayela Kusho Lalela Road!
Ayikho, hhayi ulalele okushiwo yinhliziyo yakho. Hhayi ngalesi sikhathi noma kunjalo. Lalela umgwaqo. Ngokwezwi nezwi igama elithi. Tyres zenze umsindo ezahlukene uma ushayela ku-iqhwa, okuyinto esinye isizathu ukugcina umthamo umsakazo wakho phansi ebusika ukushayela ngokuphepha. umsindo emgwaqweni Snowy kufanele kuqonde elikhulu ngoba iqhwa wakhahlela up. Uma ngokungazelelwe kumdumo iyama, ungase isisukile iqhwa ice. Hlala ubukele ku- umsindo amathayi akho esendleleni ukugcina phezu kwazo nemigwaqo emibi ukuthi ngokuvamile ukushintsha ngokushesha, ikakhulukazi phakathi noma kwesokudla kulandela ukuhlasela kwesiphepho.
Indlela Hlala Safe Nakuba Ukushayela Phakathi Winter? Qiniseka Wiper yakho ketshezi oluqukethe anti-nqabela, ngakho isifutho ayigongobali phezulu kubanda. Cabanga ukuthenga Wiper ebusika izindwani, okuyinto ukuvimbela ice neqhwa kusukela lukhuni phezu Wiper!
Ngalandela amathiphu akho bese namanje wabambeka
Ngezinye izikhathi, lezi zinto Cant kungagwenywa. Uma babhajwe iqhwa nazi amathiphu asheshayo:
Hlala ne imoto yakho: imoto yakho inikeza amatende esikhashana futhi kukwenza kube lula abatakuli ukuze zithole ukuthi uhlalaphi. Ungazami bahambe sekuseduze ukuba kugadle inhlekelele. Kulula sikhohlwe imoto yakho uthule iqhwa futhi babe elahlekile.
Musa overexert ngokwakho: Lapho ukumba out imoto yakho, ukulalela umzimba wakho futhi uyeke uma uKhathele.
Yiba Ibonakala: Bopha indwangu enemibala ekhanyayo ku-antenna yemoto yakho noma ubeke indwangu ngaphezulu kwewindi elihlanganisiwe ukukhombisa ukucindezeleka. Ebusuku, ukugcina ukukhanya Dome uma kungenzeka. It kuphela isebenzisa inani elincane ugesi futhi ngeke wenze kube lula abatakuli ukukuthola.
Sula Pipe Exhaust: Qinisekisa ukuthi ipayipi qeda is hhayi avimbekile nesithwathwa, iqhwa, noma udaka. A ivinjiwe qeda ipayipi kungabangela esibulalayo i-carbon monoxide igesi ukuthi kuvuze i-kuleli gumbi engangikulo abagibeli imoto ngenkathi injini iyasebenza.
Hlala Warm: Sebenzisa noma iyiphi kuyatholakala vimbela umzimba wakho ngenxa yamakhaza. Lokhu kungabandakanya amacansi phansi, amaphephandaba, noma amabalazwe wephepha. Oku-iphakethe zokulala kanye izingubo esindayo ukusebenzisa uma esiphuthumayo.
Londa Okokhelekayo: Uma kwenzeka, sebenzisa kuphela injini bese heater isikhathi eside ngokwanele ukuze ususe obandayo. Lokhu kuzosiza ukonga uphethiloli.
car Travel? Ziba konke thina nje wathi
Kuthiwani uma kwakukhona indlela ungase ugweme zonke kokuhlupheka ngenhla sokuhlala ephephile ngenkathi ushayela? Uma kuphela kwakukhona imodi yezokuthutha ukuthi ungase gxuma ungene, futhi yokufinyelela lapho uya khona ngokushesha futhi ukuhamba ngokuphepha. Oh ulinde, nakhu! Ibizwa ngokuthi isitimela!
Kuyiqiniso ukuthi izimoto ukunikeza inkululeko ukuthi zimbalwa ezinye izindlela uyisa ukwenza. Ungakwazi ahambe ngenye ingatholakali imigwaqo ugu, ikhanda emizaneni kude, futhi ungakhathazeki mayelana amasheduli noma izihlalo ukuthengisa ngaphandle. Akuzona ngaphandle amaphutha abo, Nokho. Bheka izizathu eziningi ngenhla!
Izitimela kuphephe futhi ngokushesha! Ngakho asikho isidingo ukuze uhlale uphephile lapho ushayela uma Qeqesha travel, futhi Izitimela kukhona ethengekayo, ikakhulukazi uma usebenzisa i Londoloza Isitimela ukubhuka amathikithi akho isitimela. Udinga ekholisa ngokwengeziwe? Thina wabhala lonke ibhulogi ku kungani isitimela sokuvakasha luphakeme travel umgwaqo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba eDenmark, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Isitimela Sokuvakasha Kwezwe, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe